उच्च पदमा पुगेका महिलाले किन गर्छन् बढी डिभोर्स? « Deshko News
उच्च पदमा पुगेका महिलाले किन गर्छन् बढी डिभोर्स?
जति उच्च पदमा पुग्यो जीवन उति प्रेमिल र सुखद होस् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ ।महिलाका हकमा भने यो ठीक उल्टो छ । नारी समानतालाई निकै महत्व दिएका देशमा पनि उच्च पदमा पुगेका महिलाको जीवनमा पारपाचुके अत्यधिक पाइएको छ।
विशेषगरी महिला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को सम्बन्धविच्छेद अत्यधिक देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । स्टकहोम युनिभर्सिटीले वभिन्न कम्पनीमा कार्यरत १ सयभन्दा बढी विपरीतलिंगी दम्पतीमा अध्ययन गरेको थियो । त्यसलाई अमेरिकन इकोनोमिक जर्नलमा प्रकाशन गरिएको छ ।
प्राध्यापक जोन्ना रिक्नेका अनुसार सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा तीन दशकसम्म भएका घटनालाई यसमा समेटिएको छ । मेयर, सांसद, चिकित्सक, प्रहरी अधिकारीमा पनि यो लागू भएको प्रतिवेदनको दाबी छ ।
अत्यधिक दम्पतीले कामको तनावले परिवार छिन्नभिन्न भएको बताएका छन् । यो अध्ययनले महिला उच्च पदमा पुग्दा बिदामा सँगै बस्ने र घरको काम विभाजन गरेर गर्ने अपेक्षा पूरा नभएको देखाएको छ ।
यद्यपि सम्बन्ध विच्छेदको पहल कसले गर्छ भन्ने खुलाइएको छैन । तीमध्ये एक सीईओ ३९ वर्षीया कार्लोट युङले लगातारको यात्रा, पदअनुसारको लामो कार्य समय र उच्च प्रोफाइलमा बसिरहनु सम्बन्ध बिग्रनुमा जिम्मेवार हुने बताइन् ।
लैंगिक समानताको सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको स्वीडेनमा भने यो समस्या कम रहेको देखिएको छ । यसमा बिदामा उदार अभिभावक, दिवा हेरचाहको आलोपालो, कामको मेलमिलापपूर्ण व्यवस्थापन यसका कारण हुन् । याे खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।